I-Ranmoor Lodge emangalisayo eSheffield Mills/Canning - I-Airbnb
I-Ranmoor Lodge emangalisayo eSheffield Mills/Canning
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguBridget
Indlu enevaranda enomtsalane eSheffield Mills, amagumbi okulala ayi-2 anebhedi enkulu, enye enomoya otyhefayo, i-futon kunye nendawo enkulu yokuhlala kwigumbi lokuhlala, enomabonakude enkulu ephucukileyo, i-Hi-Speed Fliday Op, ikhitshi elikhulu lokutya, indawo yokuhlamba iimpahla, umphandle wendawo yabucala kunye nokusetyenziswa kwepuli kwiinyanga zehlobo. Kufuphi neWolfville kunye neendawo ezininzi zokwenza iwayini kwimizuzu eyi-. Indawo entle yeentsapho ezikwindawo entle.
Ikhaya lakho elikude nekhaya lilindile...
Amagumbi okulala amabini amakhulu, aneekhabhathi ezipheleleyo, enye enomoya otyhefayo kunye nenye ehamba ngeenyawo ukuya kumgangatho omncinci ukuze ubukele ii-sunsets phezu kweNtaba yaseNorth okanye ii-bald eagles ezivela kwi-E Eagle Watch ekufutshane. Ikhitshi elipheleleyo elinazo zonke izinto eziluncedo (isitovu, i-microwave, ifriji enkulu, zonke izinto zokupheka) indawo yakho yokuhlamba iimpahla, igumbi lokuhlambela elitsha kunye negumbi elikhulu lokuhlala elinesikrini esikhulu seTV ukuze sikudibanise neNetflix. Ihlelo kunye ne-futon zingasetyenziselwa iindwendwe ezongezelelekileyo eziyi-2 ukuya kweziyi-3 kwaye igumbi likhulu ngokwaneleyo ukuba linganela umatrasi ompontshwayo ukuba ufuna njalo. Ukungena ngaphandle kwesitshixo ukuze kube lula kuwe, indawo yakho yokuhlala yabucala kunye neendawo zeveranda ezineendawo zokoja nokufikelela kwipuli yendlu enkulu kwiinyanga zehlobo igqibezele le ndawo incinci yeparadesi. Ngenxa yeziganeko zakutshanje, senza unakonako ukuze sibulale iintsholongwane kwiindawo ezibanjwa qho ngaphambi nasemva kokubhukisha ibe ukuba kukhona izinto ezigulisayo, sisebenzisa isepha yokuhlamba impahla engenaziqholo nezinto zokucoca apho kunokwenzeka.
Ukuba phakathi kweNtlambo yenye yezizathu ezininzi zokuba ukuhlala eRanmoor Lodge yeyona ndawo ifanelekileyo yokuzikhupha kwabantu abathandanayo okanye nje ithuba lokuvuselela umphefumlo. Ngenxa yeemarike zamafama ezininzi, iindawo zokwenza iwayini, iindawo zokwenza utywala kunye nezinto ezenziwayo, ininzi into onokuyibona uze uyenze. Iindwendwe ezininzi ebezibhukishe iintsuku ezimbini, zinqwenela ukuba zibhukishe iveki yonke okanye ixesha elide xa bezibona ukuba yonke into ifikeleleka njani.
IINDAWO ONOKUYA KUZO/AMACEBISO:
I-Sheffield Mills/iCanning ineendawo ezintle onokuzibona kunye neendawo ezintle onokuzityelela. Nanga amacebiso athile e nakwindawo engqonge le ndawo.
Kwimizuzu nje embalwa ukusuka e-Ranmoor Lodge, yi-Dickie Baxter Taproom kunye ne-Bistro, eyona nto yakutshanje eyongezelelweyo kule dolophu yobugcisa. Ivuliwe kuphela kwiinyanga ezimbalwa (kuvulwe kwiNtwasahlobo ka-2021) kwaye sele ibangele ukukhuthala phakathi kwethu. Indlu eyakhiwe ngohlobo lwe-circa 1852 elungisiweyo, yaphendulwa yaba yindawo eshushu yakutshanje kaCanning. Indlu Yekofu Yaselali yenye indawo entle yokuphumla uze uzihlaziye, ibe indawo entle esedolophini yenza abantu bazive besekhaya kwiindwendwe nabakhenkethi. Ithe nca phakathi kweGalari yeArtCan & Café yexesha elithile lonyaka, i-Brasserie yeBrasserie, i-Aspinall Pottery, i-The Landing Spa & Studio, ivenkile ye-Ice Cream yexesha elithile lonyaka, kunye ne-Elmé (i-boutique yefashoni), zonke zibuyele kwi-Habitant River, ezibonisa ubuhle bomfundisi.
Imarike Yenyama YaseCanning Village yindawo entle efihlakeleyo yeValley kuzo zonke iindawo zakho zokoja inyama, ii-burger kunye nesoseji yezobugcisa. Kwakhona, jonga iSea Level Brewing kwi-Millstone Harvest Brew House, iNova Scotia 's first Estate Brew House, umzuzu nje ukusuka kwiLodge.
Nantsi enye into ethethwa ngeCanning ukusuka apho kwiwebhusayithi:
‘Ilali yaseCanning kunye nendawo, kuquka iKingsport, iHabitant, iScots Bay, iBlomidon, iSheffield Mills, iPereau neMedford, zibonakala kakuhle njengoko ziphithizela. ICanning Village yindawo efudumeleyo, efudumeleyo yokuhlala, yokusebenzela, yokuthenga, yokutyelela neyokwenza ishishini. Sisendleleni eya kwiindawo ezintle nezahlukileyo ezikufutshane, njenge-The Bay of Fundy (enye yeendawo ezisixhenxe zaseMntla Merika), iBlumidon Regional Park emangalisayo, iiKingsport ezimangalisayo kunye neeHouston 's Beaches, iThe Look Off, iScots Bay, iCape Split, nezinye. Yima ngoCanning xa usiya okanye usuka eBlumidon Estate, indawo yethu yokwenza iwayini, okanye iLobster Pound kwiHolo 's Harbour, uze utye, uzihlaziye, uthenge, uthenge izinto ezidingekayo, okanye uphumle nje kwiPaki yethu entle engasemanzini. Siyazidla ngembali yethu njengenye yeendawo ze-Nova Scotia ze-esteryear kwaye sine-intanethi ephucukileyo kunye nenkqubo yamanzi esemgangathweni enikezela ngamanzi acocekileyo, amnandi kwiilali nakwindawo.”
Iholo Izibuko: Izibuko
Leholo yindawo entle yokuloba eselunxwemeni lweBay of Fundy, kwiphondo laseKhanada laseNova Scotia. Inegama layo kwi-hamlet encinci yokuloba nakwintsapho enkulu ethatha indawo emalunga neekhilomitha eziyi-5. Ngasezantsi, le ndawo ijonge iAnnapolis Valley, kumantla ijongene neBay of Fundy, empuma yeSheffield Vault nakwiNtshona yeChipman Brook. Le ndawo intle kakhulu kwaye i-hamlet ngokwayo ibhengezwe njengendawo yokufikela kweNova Scotia Tourism Destination. Izibuko liqhayisa ngevenkile yokutyela entle kunye ne-lobster pound esandul 'ukulungiswa, istudiyo samagcisa, izinto zakudala kunye neegalari zobugcisa.
Blomidon Look-Off isemantla eNorth Mountain kummandla weFundy Shore neAnnapolis Valley. Yindawo encinci esecaleni kwendlela eya eScots Bay, apho unokubona kakuhle iAnnapolis Valley. Ngosuku olucacileyo, ungabona iingingqi ezintlanu ukususela ekukhangeleni.
IScots Bay Regional Park, ekummandla weBay of Fundy neAnnapolis Valley, yindawo encinci yepikiniki ekufikelelwa kuyo elwandle kwiWharf Road. Bukela njengoko elona thuba liphezulu ehlabathini liza kunyuka lize liwele phambi kwamehlo akho!
Ukususela ngoDisemba ukuya kuFebruwari Sheffield Mills, kwimizuzu nje eyi-5 ukusuka eCanning, iba yindawo entle yokubuka iindawo kwabo bavuyela amahashe. Abahlali bentsapho batshintshe iimpela-veki ezimbini zokugqibela ngoJanuwari zaba ngumcimbi okhulayo. Kunye nabantu bee-eagles, iwotshi ngoku inamanye amatheko afana nesidlo sakusasa se-pancake, kunye nokuzonwabisa ngomculo. Lo mcimbi uye wathandwa kakhulu kwiminyaka emininzi, kwaye ngoku kuxelwa ukuba uzisa iindwendwe ezingaphezu kwe-1000 ukuze zibukele amahashe akhulayo. Kukwakho nokukhenketha okusuka e-Hafax okuzisa imithwalo yebhasi yabantu abasuka esixekweni ukuze babone oku kunye nezinye iindawo ezinomtsalane zase-Annapolis Valley.
Qho ngo-Oktobha, iWolfville likhaya leDevour Film Fest - into enokonwatyelwa emangalisayo yokupheka exutywe neefilimu ezimangalisayo kwaye yindawo yokutya neyokubukela iimuvi ngokufanayo.
Ndiyakuthanda ukudibana neendwendwe zam ndize ndicacise indlela izinto ezisebenza ngayo, kodwa ukuba ukhetha ukuba izinto zakho ziyimfihlo, siza kukushiyela izixhobo zakho. Kodwa ke, sisoloko sikhona xa ufuna nantoni na. Izinja zethu zinobubele kakhulu kwaye ziyazithanda iindwendwe ezintsha, ngoko nakuphi na abanikazi bezinja abaziphosiyo izilwanyana zabo, zisebenza njengabantu abasemagqabini!
Ndiyakuthanda ukudibana neendwendwe zam ndize ndicacise indlela izinto ezisebenza ngayo, kodwa ukuba ukhetha ukuba izinto zakho ziyimfihlo, siza kukushiyela izixhobo zakho. Kodwa k…